04/07/2018 - Page 3 sur 4 -
Seranam-piaramanidina Ivato : Nahitana fatin-jazakely vao teraka
04/07/2018 admintriatra 0
Fatin-jazalahikely vao teraka indray no nisy nanary teo anelanelan’ny “Hagar Compagnie STA” sy ny orinasa Tiko, tao anatin’ny faritry ny seranam-piaramanidina Ivato omaly maraina. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia mpiasa eny an-toerana no …Tohiny
Vonoan’olona tany Mitsinjo : Lehilahy iray no voatonona ho tompon’antoka
Voasambotry ny mpitandro filaminana ny alahady lasa teo ny lehilahy iray voarohirohy ho isan’ny tompon’antoka tamin’ny raharaha vonoan’olona. Tany amin’ny tanàna antsoina hoe Morafeno, fokontany Madirotoka kaomina Bekipay distrikan’i Mitsinjo no nisehoan’izany. Raha tsiahivina moa …Tohiny
« Tompon’andraikitra »
Misy maniry ny tsy hivahan’ny krizy eto Madagasikara mihitsy angamba ireo mpanao politika. Efa eo ambavan’ny vahaolana amin’izao korontana tsy manam-piafarana izao ny Malagasy kanefa dia mbola misy amin’ireo mpanao politika indray no nitsangana nanohitra …Tohiny
Fahasalamana : Apetraka mialoha ny fisorohana ny pesta
Mitohy ny ady amin’ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Ho fisorohana mialoha ny mety hiparitahan’ny valanaretina dia misy ny atrik’asa “revue après action” handinihana ireo paikady vaovao sy ireo asa efa vita nataon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, eny …Tohiny
Orinasa manana ny lanjany maneran-tany eo amin’ny famokarana fiarakodia ny orinasa Donfeng ary isan’ny hamatsy fiara lehibe antsoina hoe “autobus intelligent” ho an’ny fitaterana eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha ny tapaka omaly tolakandro teny ...Tohiny
Epp Antanimbarinandriana : Nahazo tranom-boky raitra
10 miliara dolara :AVO DIMY HENY NOHO NY TAMIN’NY 2002
Fanokafana ny lisi-pifidianana : Manome 24 ora ireo kandidà 22